Software များ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ယူရေးနပ်စ browser ၏သင့်သုံးသပ်ချက်များ? ဒါဟာ installed ရပါမည်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်ချိုသောအရာတစ်ခုခုရှိပါသလော
ယူရေးနပ်စ browser ၏သင့်သုံးသပ်ချက်များ? ဒါဟာ installed ရပါမည်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်ချိုသောအရာတစ်ခုခုရှိပါသလော ကျွန်မအဖြစ်ဝေးငါသိအဖြစ်ရှုမြင်ကြပြီမဟုတ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သော browser ကိုပြုလုပ်အထူးသဖြင့်သူကအကြံပြုသည်မဟုတ်။ ကောင်းပြီ, သာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၏ မှလွဲ. ...
Excel ရှိ“?” မေးခွန်းအမှတ်အသားကိုမည်သို့ရှာဖွေပြီးအစားထိုးနိုင်သည်
Excel တွင်“?” မေးခွန်းအမှတ်အသားကိုမည်သို့ရှာပြီးအစားထိုးရမည်နည်း။ Ctrl + H ကိုနှိပ်ပါ။ ပထမနေရာတွင်ဤအမှု၌“ ငါတို့ဘာတွေပြောင်းနေပြီလဲ” ဟုရိုက်ပါ။ ဒုတိယ“ L” သည်“ L” ဖြစ်ပြီး၊ အစားထိုးကိုနှိပ်ပါ။
Active ကို Windows 8 အကူအညီကို Windows 8 Pro ကို 64x 9200 Build များအတွက်အလုပ် Active ကိုရှာ။ ကြိုတင်မဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကီလိုမီတာအဆိုပါအနိုင်ရ 8 များအတွက် activators နှင့် 8.1 keyspack.blogspot.jp http://bestgamer.net/load/programmy_antivirusy/programmy_dlja_pk/kmspico_9_2_3_2014_eng/106-1-0-52260 ကိုသင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးတည်ဆောက်? ဒီတစ်ခါလည်းသူ ...
! အဘယ်သို့ avast! များ၏မှတ်ပုံတင်ကြေးတိုးချဲ့ဖို့ ??
! အဘယ်သို့ avast! များ၏မှတ်ပုံတင်ကြေးတိုးချဲ့ဖို့ ?? ဒါကြောင့်ကောင်းစွာငါ esch fixed မဟုတ်လျှင်သင်လျှင်, registry ကိုအတွက်သန့်စင် avast! folder ကိုအလုပ်မလုပ်ဘူးလျှင်, လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကမှနာရီပြန်စီသတိရ ...
သင် program ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲစရာမလိုဘဲအွန်လိုင်းအခမဲ့ Word documents ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ။
သင် program ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲစရာမလိုဘဲအွန်လိုင်းအခမဲ့ Word documents ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ။ အဘယ်သူမျှမပါ, အဲဒီနောက်, Hotmail အပေါ်တစ်ဦးစာတိုက်ပုံးမှတ်ပုံတင်ရန် အကယ်. ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် SkyDrive တွင်, လက်ရှိနေတဲ့ Windows Live ရှိရမည် ...
PC ကို sleep mode ကနေပြန်လာမထားဘူး
PC ကိုဤနေရာတွင်) က = ကအေးအပေါ်မှုကြောင့်ဖုန်မှုန့်ဖွယ်ရှိသည်အိပ်စက်ခြင်း mode ကိုထံမှရယ်စရာအဖြေကိုမပြန်ဘူး .. ဒါဟာ disable လုပ်ဖို့ hard disk ကို power supply setting တွင်လိုအပ်သောဖြစ်ပြီးဘယ်တော့မှဖြစ်လိမ့်မည် ...
PowerPoint နှင့်အတူကိုကူညီပါ။ အသုံးပြုဘယ်လိုနေသလဲ? ဤအစီအစဉ်နှင့်အတူတစ်ဆလိုက်ဖန်တီးပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုဆလိုက်စာသား, သရုပ်ဖော်ပုံများနှင့်အမျိုးမျိုးသောဂရပ်ဖစ်ဒြပ်စင်ဆံ့နိုငျသညျ။ သင်, ဆလိုက်၏အမိန့်ကိုပြောင်းလဲ add, မလိုချင်တဲ့ delete နှင့်နိုင်ပါတယ် ...
Regclean Pro ကိုများအတွက်လိုင်စင် key ကိုချွတ်ပစ်
အခြားသော့ချက်လည်းမရှိ Regclean Pro ကို http://relizua.com/optimizaciya-os/36-regcleaner-rus-key.html များအတွက်လိုင်စင် key ကိုချွတ်ပစ်သင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းမှတံခါးသော့ကိုဖန်တီး 00ZNXX-FA684X-21PQZQ-41H89P program ကို install ကူညီပေးခဲ့သည်ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ 1-ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းကို: ရှောင်ရှားရန်သော့ချက်ပျံသန်းအိမ်ရှင်ဖိုင်ကို Add ...
iTunes ကိုထည့်သွင်းသောအခါ "Apple မိုဘိုင်းပစ္စည်း ၀ န်ဆောင်မှုအမှားအယွင်း" သတင်းစကားပေါ်လာလိမ့်မည်။
iTunes ကိုထည့်သွင်းသောအခါ "Apple မိုဘိုင်းပစ္စည်း ၀ န်ဆောင်မှုအမှားအယွင်း" သတင်းစကားပေါ်လာလိမ့်မည်။ 1 ။ ပထမဆုံး iTunes ကိုပိတ်လိုက်ပါ။ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပြန်လည်စတင်နိုင်ရန်မိုဘိုင်းကိရိယာကိုကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
အလိုအလျောက် update ကို Windows အတွက်7disable လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Windows7အလိုအလျောက်အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ။ ငါထောက်ခံတယ် comp ခဲနေသောအသုံးမကျသောနှောင့်အယှက်အမှိုက်ပုံ။ အဆင့်ဆင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ cifraservis.ru/upravleniewindows/otlucit_obnovleniya/ Control PanelSystem နှင့် SecurityWindows Update Centre ၏ parameters များကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ပါ -“ Load ...
ဘယ်လို Windows ကို7crack ဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်?
ဘယ်လို Windows ကို7crack ဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်? ဤတွင်လုံးဝပညာရှိပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3908973 Active loader ကိုသငျသညျကို Windows ကို install အခါ, Enable ကို uncheck လုပ်, အော်တို updates များကို install လုပ်ပြီးနောက်အပြီးအစီးငွေကောက်ခံ vzlomz Disable ...
ဧဝရက်သို့မဟုတ် AIDA64 ။ ဤအစီအစဉ်များ၏ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ?
ဧဝရက်သို့မဟုတ် AIDA64 ။ ဤအစီအစဉ်များ၏ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ? သငျသညျနှစျခုတက္ကစီဧဝရက်တောင်ထိပ်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်။ IMHO ငါဧဝရက်တောင်ထိပ်ကိုသုံးပါ။ ကောင်းသော prog ။ ဒါဟာတဦးတည်းနှင့်အတူတူပင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ FinalWire ကုမ္ပဏီတရားဝင်ကြေညာခဲ့သည် ...
Comodo အကြောင်းကို comments နှင့်ထင်မြင်ချက်များ
Comodo ကွန်အကြောင်းကို comments နှင့်ထင်မြင်ချက်များ, သင်သည်ထိုသူတို့ထံမှငွေကိုထုတ်ခေါက်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့်ရုရှားက🙂 Komodo အတွက်စမ်းသပ်ချက်များအတွက်အသုံးမပြုတဲ့အဟောင်းကို PC ပေါ်မှာထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ကအပေါ်ကိုစမ်းသပ်ခင်မှာ ...
နှုတ်ကပတ်တော်ကို 2007 ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဘယ်မှာရှိသနည်း လူများ, ရပ်ကွက် 2007 မှ pliz link ကိုကြကုန်အံ့။ Desire kryaknuty ။ နှင့်အင်တာနက်ထဲမှာငါမတှေ့နိုငျ
နှုတ်ကပတ်တော်ကို 2007 ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဘယ်မှာရှိသနည်း လူများ, ရပ်ကွက် 2007 မှ pliz link ကိုကြကုန်အံ့။ Desire kryaknuty ။ နှင့်အင်တာနက်ထဲမှာငါကဒီမှာသင် http://otvet.mail.ru/question/75572500/, အစ်ကိုကုမ္ပဏီကိုမတှေ့နိုငျပါသညျ။ kar Karych ကျေးဇူးတင်စကား! အားလုံးအမှန်ခြစ်ထား ...
ငါသတ်ပုံစာသားမှ program တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ သူမအဆင်သင့် TXT ဖိုင်ခံစား, ငါသတ်ပုံကနေရေးသားဖို့အချိန်ရှိခဲ့ကြောင်း။
စာသားကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရေးဆွဲဖို့ပရိုဂရမ်တစ်ခုလိုတယ်။ ဒါကြောင့်သူမ TXT ဖိုင်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်၊ ငါသတ်ပုံအောက်မှာရေးခဲ့ရတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်ကို "Talker" ဟုခေါ်သည် - ဤနေရာတွင် http://biblprog.org.ua/en/govorilka/ သို့ကူးယူပါ။
သင်ကားမောင်းသူ RNDIS Ethernet Gadget ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာ? ငါက Windows XP ကိုမှကို USB wifi router ကို Ritech 600 အားဖြင့်မချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်
သင်ကားမောင်းသူ RNDIS Ethernet Gadget ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာ? သငျသညျသံအတိအကျအဘယ်အရာကိုမျိုးကိုမသိရပါဘူးသို့မဟုတ်မတှေ့နိုငျလြှငျငါက Windows XP ကိုမှကို USB wifi router ကို Ritech 600 အားဖြင့်မချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ် ...
Synulka အကူအညီနဲ့ပြန်လာလုပ်နည်း, ဇောက်ထိုးလက်ပ်တော့အပေါ်မျက်နှာပြင်လှည့် !!!
Sonny ကလက်ပ်တော့ပ်ကိုဇောက်ထိုးလှန်လိုက်သည်။ ဘယ်လိုပြန်လာရမလဲ။ ဗီဒီယိုကဒ်၏ setting တွင်။ http://otvet.mail.ru/question/60832602/ ထိုင်ခုံခါးပတ်သို့ - Desktop - ညာဖက်နှိပ် - ဂရပ်ဖစ်လက္ခဏာများ .... အဲဒီမှာကလစ်နှိပ်ပါကြည့်ပါ ...
PC ထဲ၌“ D” drive ထဲသို့စကားဝှက်ကိုမည်သို့ထည့်ရမည်နည်း။
PC ထဲ၌“ D” drive ထဲသို့စကားဝှက်ကိုမည်သို့ထည့်ရမည်နည်း။ Hide Folders ပါ ၀ င်သောအရာများကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။ 2009 v3.9 Build 3.9.5.695 Final http://www.cwer.ru/node/279807/ Hide Folders သည်သင်၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖုံးကွယ်ရန်အဆင်ပြေသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် ...
ပရင်တာ HP က 11311 CHINDEN BLVD BOISE, အိုင်ဒါဟို 83712 အမေရိကန်နိုင်ငံအပေါ်တစ်ဦးမောင်းသူကိုရှာဖွေငါ့ကိုကူညီပါ
သူကသူ့ကိုယ်သူအားလုံး HP.com http://support.hp.com/ru-ru/drivers/selfservice/closure/hp-laserjet-m11311 တွေ့ပါလိမ့်မယ်ပြတင်းပေါက် 83712 ပရင်တာ HP က7CHINDEN BLVD BOISE, အိုင်ဒါဟို 1120 အမေရိကန်နိုင်ငံအရပ်ပေါ်မှာတစ်မောင်းသူကိုရှာဖွေငါ့ကိုကူညီပါ -multifunction-ပရင်တာ-Series / 3447595 / မော်ဒယ် / 3447597 # Z7_3054ICK0K8UDA0AQC11TA930O2 yuzay driverplus.ru သငျသညျနာမတျောအချရေးသားခဲ့သည်ရှိရာ ...
Realtek'a Settings window7အဘယ်မှာရှိကြသနည်း
WIndows7ရှိ Realtek ဆက်တင်များသည်အဘယ်မှာရှိသနည်း။ C: Program FilesRealtekAudioHDA Control panel တွင် - AUDIO ချိန်ညှိချက်များ၊ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြီးပြီ၊ driverplus.ru ကိုစတင်ပါ။ Control Panel - ကိရိယာနှင့်အသံ - Realtek Dispatcher ကိုအသုံးပြုပါ။
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ 72 Next ကို 's Page